Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Barlamaanka Yurub ee Lagu Dhagaysanayay Dhibka Itobiya u Gaysatay Haweenka Ogadenya
Shirkii Barlamaanka Yurub ee Lagu Dhagaysanayay Dhibka Itobiya u Gaysatay Haweenka Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ February 8, 2015
Shirkan oo ay siwada jir ah usoo qaban qaabiyeen HAD ee JWXO iyo ururka Caalamiga ah ee UNPO ayay xubnaha uga qaybgalayay JWXO laga bilaabo 3-5 tii bishan waxay ku hawlanaayeen arimaha shirka iyo habka ugu haboon ee loo gaadhsiin karo xubnaha baarlamaanka Yurub uga soo qayb galaya dhagaysiga dhibaatada uu gumaysiga ku hayo shacabka Ogadenya.
Sidaan la socono shirka wuxuu ka dhacay Brussels, waxayna ONLF uga qayb gashay si rasmi ah oo loogu casuumaty isla markaana ay wufuudii uga qayb galay ugu hadaleen magaca Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya.
Mudane Badal Xassan oo hogaaminayay xubnaha ka qabgalay shirka ayaa ku tilmaamay inuu ahaa hawlgakaasi mid ku soo dhamaaday guul. Wuxuu intaa raaciyay; “Sedexdaas maalmood waxaan si gaar gaar ah ula kulmay inkabadan 15 xubnood oo ka tirsan Baarlamaanka Europe iyo Amnesty International, waxaanna ka jeediyay madasha shirka qoraal dheer oo ka koobnaa 7 page oon kusoo bandhigay xaalada guud ee Ogadenya, hadafka JWXO, sida aan u aragno maslaxda geeska Africa, xaalada dhalinyarda ree Ogadenya, xaalda kasoo fool leh geeska Africa hadii ay Itoobiya sidan kusii socoto.”
Wuxuu sheegay mudane badel in xubnihii ay la kulmeen ka filayaan natiijo wax ku ool ah oo halganka iyo shacabka Ogadenya ay ku farxi doonaan cadowguna uu ka nixi doono.
Waxaa amaan mudan Jaaliyadaha Germany iyo Holand gaar ahaan Mudane C/raxmaan Cagoole oo shirka kasoo qaybgalay suu u muujiyo dhibka lagu hayo shacabka Ogadenya. Sidoo kale waxaa si buuxda uga soo qaybgalay rug cadaaga Holland oo waftigii meesha tagay ay ku diirsadeen markay arkeen abaabulka ay ku yimaadeen sababtoo ah waxay imaatinkoodu sharaxaad u noqotay qoraaladii uu waftiga JWXO u gudbiyay mudanayaasha baarlamaanka Yurub.
Wuxuu waftiga JWXO u gudbiyay Baarlamaanka midowga Yurub codsi ay ka mid ahaayeen; In ay Itobiya lagu cadaadiyo in ay joojiso ku xadgudubka xaquu qul insaanka, oo laga qaado shacabka Ogadenya cadaadiyaan iyo xayiraada ganacsiga, taasoo wax weyn u dhintay noloshii dadweynaha caadiga ah. In sidoo kale Itobiya laguu cadaadiyo in hay’adaha samafalka u fasaxdo in ay gargaar gaadhsiiyaan shacabka baahan ee Ogadenya. In saxaafada iyo ururada xaquuqul insaanka loo fasaxo Ogadenya oo baadhitaan ay ku sameeyaan xadagudubka ka dhacay Ogadenya ee Itobiya ay qarinayso.
Shirka waxaa joogay oo kasoo qaybgalay xubno kasocda Safaarada Itobiya ee Belgium, oo ahaa qaar haysta dhalashada dalka Belgium, waxayna dhagaysteen khudbooyinkii goobta ay ka jeediyeen waftigii ka socday JWXO.